२६ माघ २०७२, मंगलवार १७:१२	0 496
उपत्यकाका चार नारायण ’bout जान्नैपर्ने कुराहरु
२६ माघ २०७२, मंगलवार १५:००	0 1,156
हिन्दु धर्म अनुसार चार नारायण शक्तिशाली मानिन्छ । ति हुन् भक्तपुरको चाँगुनारायण, काठमाडौंका शेषनारायण, इचँगुनारायण र ललितपुरको विशङ्खुनारायण । त्यसो त बिभिन्न चाडपर्वहरुमा यी नारायणस्थलहरुमा भक्तजनहरुको भिड लाग्छ । अन्य समयमा पनि यहाँ दर्शनार्थीहरुको प्राय: सधै भिडभाड नै हुन्छन । आखिर के महत्व छ त चार नारायणको ? पढ्नुहोस....
यसरी चिट चोर्छन् विद्यार्थी (पढ्नुहोस् ३४ तरीका)
२६ माघ २०७२, मंगलवार १०:४७	0 1,588
परीक्षामा चिट नचोर्ने कमै होलान । तपाइले कस्तो कस्तो तरिका अपनाएर चिट चोर्नु भो ? चिट चोर्नु अनैतिक र गैर कानुनी हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि हामी चिट चोर्न छोड्दैनौ किनकी हामीलाई जसरी पनि परीक्षा उत्तीर्ण हुनु छ । हरेक बिद्यार्थीलाई परीक्षा भनेपछि शत्रु झैँ लाग्छ । त्यसो त परीक्षा उत्तीर्ण नगरी कोही पनि सफल हुन् भने सक्दैन । जागिरका लागि लिइने परिक्षा होस् अथवा विद्यार्थी जीवनमा लिइने परिक्षा नै किन नहोस । त्यसो त परीक्षा उत्तीर्ण गर्नका लागि परीक्षार्थीहरुले अपनाउने शैली हो चिटिङ् । बिद्यालयदेखि बिश्वबिधालयसम्म बिश्वब्यापी रुपमा चिट चोरिन्छ । विश्वमा चिट चोर्ने बिभिन्न तरिकाहरु रहेका छन् । पढ्नुहोस् बिद्यार्थीहरुले चिट चोर्ने ३४ तरिका....
२५ माघ २०७२, सोमबार ०९:१८	0 11,678
यस्तो १० सपना जसले मृत्युको संकेत गर्छ
२२ माघ २०७२, शुक्रबार १२:३९	0 818
सपनाको भबिष्यबाणीमा कतिको बिश्वास हुन्छ ? यसमा कतिपयलाई बिश्वास लाग्ला त कतिपयलाई बिश्वास नलाग्ला तर यो सबैको चियो र चासोको बिषय बन्ने गरेको छ । त्यसो त कस्तो सपना देख्दा कस्तो फल प्राप्त हुन्छ भन्ने बिषयमा बिभिन्न धारणाहरु रहेका छन् । यहाँ हामी तपाईलाई यस्तो १० सपनाको बारेमा जानकारी दिदैछौ जसले मृत्युलाई संकेत गर्दछ । के कस्तो सपना देखिए मृत्युको खबर प्राप्त हुने अथवा मृत्यु हुन् सक्छ त ? पढ्नुहोस...
१९ माघ २०७२, मंगलवार ०७:३८	0 1,317
१७ माघ २०७२, आईतवार ०६:५१	0 437
राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सूचना प्रविधिको कुम्भमेला क्यान इन्फोटेक चलिरहेको छ । मेलाको दोश्रो दिनसम्ममा १ लाख २४ हजार ३ सय ८२ जनाले अवलोकन गरिसकेका छन् । इन्फोटेकमा सहभागि कम्पनीहरुले नयाँ नयाँ प्रविधिजडित उत्पादनहरु आकर्षक स्किमका साथ सार्वजनिक गरेका छन । विशेष गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक स्टलहरु, नेपाल टेलिकम, स्मार्टफोन र ट्याब्लेटका स्टलहरु, ल्यापटप, कम्प्युटरका स्टलहरु, इन्भर्टर तथा ब्याट्रीका स्टलहरु, सफ्टवेयर तथा एन्टिभाइरसका स्टलहरु, फोटोकपी, प्रिन्टर, प्रोजेक्टर, स्क्यानर, एटेन्डेन्स मेशिन, राउटर, सिसिटिभी लगायतका स्टलहरु आकर्षणको केन्द्र बनेका छन । प्रदर्शनीमा हार्डवेयर सेल्स तथा मेन्टीनेन्स्, पावर सोलुसन्स्, मोवाईल एसेसोरिज, डिलर र डिस्ट्रिव्युटर्स, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिकम्युनिकेशनस्, आईसीटी कलेज तथा ट्रेनिङ्ग ईन्स्टिच्युटस्, सफ्टवेयर सोलुसन्स्, पेमेन्ट सोलुसन्स् लगायत गरी ११२ कम्पनीका १८८ स्टल रहेका छन । हामीले इन्फोटेकमा भएका ५ आकर्षण प्रस्तुत गरेका छौं जहाँ अवलोकनकर्ताहरुको दैनिक जसो भिड लागेका छन् ।
१५ माघ २०७२, शुक्रबार १४:३३	0 808
नयाँ शक्तिको नाममा पुराना र आफ्नो क्षेत्रमा असफल साबित भएकाहरुलाई अग्रमोर्चामा राखेर सार्वजनिक गरेपछि लामो समय चर्चामा रहेको बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति नयाँ लेबलमा पुरानै रक्सी रहेको आम टिप्पणी सुनिन थालेको छ। आम जनताको सार्वजनिक मञ्चका रुपमा रहेका चिया अनि भट्टी पसलहरुमा बाबुरामको नयाँ शक्तिले खासै मानिसहरुलाई आकषिर्त गर्न सकेको छैन। तर पनि केही सिमित मिडियाले भने उनलाई अझै नेपालमा विकासको मुल फुटाउन सक्ने र्'इन्द्रका बाउ चन्द्र'का रुपमा नै चित्रण गर्न भने छोडेका छैनन्। माओवादीमा रहँदै देखी बाबुराम भट्टराईको भारत सम्बन्ध आम मानिसमा चासोको विषय रहँदै आएको छ। त्यसो त भट्टराईकी श्रीमती हिशिला यमीको आर्थिक हैसियत र उनी जोडिएको भ्रष्ट्राचारको विषयले पनि उनको राजनीतिक छविलाई धुमिल पारेको छँदैछ। आम मानिसले आशा गरेको व्यक्तिका रुपमा उदाएका बाबुराम भट्टराईलाई लोकप्रियताको शिखरबाट ओर्लन खासै समय लागेन। यद्यपी राजनीतिको खुला बजारमा नयाँ दोकान खोल्न खोजेका उनलाई उनले बिगतमा गरेका काम, निर्णय र बाचाका बारेमा जनतालाई जवाफ नदिएसम्म नयाँ शक्तिको दोकान चलाउन भने मुस्किलै हुनेछ। नयाँ शक्तिका रुपमा उदाउन खोजेका बाबुरामसँग जनताले जवाफ पनि खोजेका छन् जुन सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा पनि सार्वजनिक भइ नै रहेका छन्। यसै क्रममा अमेरिकाको मासाचुसेटसमा बस्ने नेपाली उद्यमी रुद्र पाण्डे (पाण्डेका बारेमा यहाँबाट जान्नुहोस्) ले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत नयाँ शक्ति र बाबुराम भट्टराईलाई सात प्रश्न राखेका छन् जसको जवाफबाट मात्र आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन, विधिको पालना लगायत उनको राजनीतिक भविष्यको आँकलन गर्न सकिन्छ। उनका प्रश्नहरु यस्ता छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीका हाँसो लाग्दा २७ उखान टुक्का
१४ माघ २०७२, बिहीबार १४:५७	0 1,525
तार्किक र हस्यौली उखान टुक्का भन्न खप्पिस छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीको टुक्काले कयौ पटक बिपक्षीहरु चिधिएका छन् भने कतिपयले प्रतिबाद पनि गरेका छन् । आखिर जे जसो भए पनि उनका टुक्काहरुले भाषणलाई चोटिला बनाउने गरेका छन् । स्रोता दर्शकलाई मनोरञ्जन दिने गरेका छन् । हेरौ प्रधानमन्त्री ओलीका २७ उखान टुक्का जुन पढेर जस्तो सुकै कठोर मानिस पनि पेट मिचिमिची हाँस्न बाध्य हुन्छन ।
१३ माघ २०७२, बुधबार १५:०५	0 2,196
यस्ता ५ बानी गर्छ हानी
१२ माघ २०७२, मंगलवार १६:५८	0 629
सफलताको साँचो हो बानी र ब्यबहार । तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको व्यवहारले देखाउँदछ । तपाईँको बानीले तपाईँको स्वभाव झल्काउँदछ । बानी सफलताको साँचो मात्र होइन असफलताको आधार पनि हो तसर्थ केही यस्ता बानीहरु छन् जुन हामीले त्याग्नु पर्छ तब मात्र सफलता हात लाग्छ । यदि तपाईको पनि यस्तो बानी छ भने त्यागी हाल्नुहोस ।
बायोडाटा बनाउदा धेरैले गर्ने ५ गल्ती
११ माघ २०७२, सोमबार १२:२८	0 472
बायोडाटाले नै जागिर पाउने/नपाउने सम्भाबनाको निर्क्यौल गर्छ । तसर्थ यो एकदमै महत्वपूर्ण प्राथमिक कागजात हो । तर यति धेरै महत्वपुर्ण डकुमेन्ट बनाउन पनि हामी हेलचेक्राइ गर्छौ । जसले गर्दा हातमा आएको जागिर समेत गुम्ने गर्छ । हेर्दा सानोतिनो लाग्ने यस्ता गल्तीहरुले ठूलो अर्थ राख्छ अर्थात यो ठूलो गल्ती हो । झट्ट हेर्दा खासै ठूलो गल्ति नभए पनि यस्ता गल्तिहरुको असर भने ठूलो हुन्छ । त्यसैले बायोडाटा कहिँ पेश गर्नुभन्दा पहिला राम्रोसंग हेर्नु पर्छ । आउनुहोस जानौं हामीले बायोडाटामा गर्ने गरेका केही गल्तीहरु । धेरैले यस्ता गल्ती गरे पनि तपाइचाहिँ नगर्नुस् तब मात्र जागिर पक्का हुन्छ ।
१० माघ २०७२, आईतवार १६:२७	0 816
७ माघ २०७२, बिहीबार १४:०२	0 2,111
यी हुन कानुनले छुन नसकेका ५ डन
६ माघ २०७२, बुधबार १२:१५	0 6,179
अस्थिर राजनीतिक अबस्था र नेताहरुको सत्ता मोहका कारण मुलुकमा मनोमानी बढ्दो छ । यसैले पनि नेतृत्व तहमा पुगेकाहरुमा समेत 'डनमोह' बढेको छ । चरी मर्दा होस् अथवा कुमार घैटे मर्दा नेताहरुले देखाएको प्रिबृति नै यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यसैकारण पनि डन भनिएकहरुको मनोबल झन झन झाँगिदो छ । र अपराध मौलाउदै गएका छन । सम्पति शुद्धीकरण विभागले ०७० साल जेठ ५ गते ‘डन’ भनेर चिनिएका पाँचजना गुण्डा नाइके विरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अहिलेसम्म गुपचुप अवस्थामै छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानविनमा परेका पाँचैजना अभियुक्तहरु धरौटी बुझाएर बाहिर निस्कएको दुई वर्षभन्दा बढी भैसक्यो । तर, राजनीतिक नेताहरुको हात टाउकोमा भएका यी डनहरुलाई न त प्रहरीले केही गर्न सकेको छ न त अदालतले नै। दुर्इ वर्ष देखी यी डन ज्वाइँ बनेर बसिरहेका छन्। उनीहरुको मुद्दाको टुंगो अहिलेसम्म लाग्न सकेको छैन । को को हुन् त ति डनहरु ? पढ्नुहोस्...
पत्ता लगाउनुस् तपाईको यो पहिलो जन्म कि पुनर्जन्म?
५ माघ २०७२, मंगलवार १८:१०	0 1,062
''केवल अनौठा यादहरु आउनाले मात्र पुर्वजन्मको संकेत गरेको भनेर भन्न सकिन्न। तर यो एउटा संकेत भने हो । कयौं पटक बच्चाहरुले अनौठा यादहरु सम्झेका घटनाहरु पाइएको छ। सामान्यरुपमा बच्चाहरु पुराना समयका घटनाहरु बढि याद गर्ने सक्ने हुन्छन। सुन्दा काल्पनिक लाग्ने त्यस्ता स्मृतिहरु बिस्तारमा सुन्दा सत्य नै सावित भएका छन् । बालकपनको बेला पुर्वजन्मका यादहरु बढी ताजा हुने गर्दछ। जति धेरै पुर्वजन्म थिए, त्यति नै त्यस्ता यादहरु बढी सम्झन्न खोज्छ मस्तिष्कले ।'' पुनर्जन्मका बारेमा धेरैले सुनेको हुनुपर्छ । कतिपयलाई यसको बिश्वास लाग्ला त कतिलाई नलाग्ला । तर जे सुकै भए पनि हरेकलाई लाग्छ कि आफ्नो यो जन्म पहिलो कि पहिले पनि मान्छे नै भएर जन्मेको थिएँ । हामीले यहाँ केहि टिप्सहरु संकलन गरेका छौ जसले तपाईको यो जन्म पहिलो हो कि पुनर्जन्म हो भन्ने बारेमा अनुमान गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौँमा धेरैले सुन्ने १० ‘न्युज’ रेडियो
४ माघ २०७२, सोमबार १६:४०	0 787
कुनै बेला संचारमाध्यमहरु मध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय रेडियो/एफएम पछिल्लो समय अनलाइनहरुको बिकाससंगै केही मात्रामा खुम्चिएको आभास हुन् थालेका छन् । त्यसो त अझै पनि रेडियोहरु खुल्ने क्रम भने जारी नै छ । औषत भन्दा पनि मनोरोंजन र समाचारमुलक रेडियोहरु स्रोताहरु माझ बढी लोकप्रिय छन् । त्यसो त पछिल्लो समय अनलाइन रेडियोहरुको विकास पनि तिब्र गतिमा भैरहेका छन् । यसले पनि रेडियोहरुको क्रेज बढ्दो क्रममा रहेको संकेत दिन्छ । हामीले यहाँ स्रोताहरुको रोजाई र अनुभावमा आधारित भएर राजधानी आसपास सबै भन्दा धेरै सुनिने 'टप टेन' 'न्युज रेडियो' हरु प्रस्तुत गरेका छौ । पढ्नुहोस कुन कुन हुन् त समाचारका लागि सर्वाधिक सुनिने रेडियो हरु....
३ माघ २०७२, आईतवार १७:०४	0 2,956
यस्ता ७८ सपना हुन्छन् खतरनाक
३ माघ २०७२, आईतवार ११:४५	0 5,519
रुढीवादी, सपना र त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा सोध्ने वा सुनाउनेलाई सबैभन्दा पहिले दिने तथा पाउने जवाफ यही हो। मानिस जतिसुकै आधुनिक भएको स्वांग पारोस् उसले आफूलाई सपनाको संसार भन्दा पर राख्न सक्दैन। सपनाको छुट्टै संसार छ, जहाँ हाम्रो अवचेतन मनले हामीलाई निन्द्राको समयमा लैजान्छ। मानिसका सबैजसो अंग र प्रणाली सुसुप्त अवस्थामा रहेको समयमा सपना देखिने भएकाले कतिपयलाई यो भ्रम जस्तो पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले धेरैले सपनाको कुरालाई भ्रम वा अन्धविश्वास भनेर टार्ने गरेको पनि पाइन्छ। तर लामो समय देखी हाम्रो समाज र परम्पराले सपनालाई एउटा महत्वको पक्षका रुपमा स्वीकारेको छ। सपनाको भाषा सांकेतिक हुन्छ र त्यसले दिने फल पनि सांकेतिक नै हुन्छ। त्यसैले त प्राचिन कालमा राजा महाराजाहरुले सपनाको अर्थ पत्ता लगाउनका लागि पण्डित एवं स्वप्न विशेषज्ञहरु राखेका हुन्थे। जतिखेर मानिसको सबै इन्द्रिय पनि काम गरिरहेका हुँदैनन त्यतिखेर हुने अनुभव हो सपना। जसले जिवनको नै संकेत गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले सपनालाई वेवास्ता पनि नगर्नुहोस्, यसले भूत, भविष्य र वर्तमानको जानकारी दिएको हुन्छ। यहाँ यस्ता ७८ सपनाको फलको चर्चा गरिएको छ, जसले तपाइँको जिवनमा संकट, समस्या, फसाद र खतराको संकेत गरेका हुन्छन्।
१ माघ २०७२, शुक्रबार ११:३९	0 2,800
२९ पुष २०७२, बुधबार १७:२८	0 22,668
भनिन्छ सपना त्यो हो जसले निदाउन दिँदैन। तर कमै मात्र मानिससँग यसखालको सपना देख्नसक्ने क्षमता हुन्छ। तर आम मानिसले भने निदाउँदा मात्र सपना देख्छन्। हामी सबै आम मानिसहरु मध्यरातमा अनेकन सपनाहरु देख्छौं कतिपय भयानक हुन्छन् र झस्केर बिउँझन्छौं भने कतिपयले आनन्द पनि दिन्छन्। भनिन्छ सपनामा मानिसले विपनामा गर्न नसकेको कुराहरु देख्छन् अनि सपनाले विपनाका कुराहरुको संकेत पनि गरेको हुन्छ। हाम्रो सांस्कृतिक मान्यताले पनि सपनालाई विशेष महत्व दिएको छ। त्यसैले संस्कृतमा विशिष्ट ग्रन्थ स्वप्नविचार प्रकाशित पाइन्छ। त्यसैको आधारमा यहाँ १७३ सपनाको फलको उल्लेख गरिएको छ।
२९ पुष २०७२, बुधबार १४:५३	0 3,282
अफिसमा नगर्नुस् यस्ता ९ कुरा
२८ पुष २०७२, मंगलवार १४:१९	0 1,158
अफिस अर्थात जीवन जिउने माध्यम । अझ भनौ आफ्नो खुबी र क्षमता प्रस्तुत गर्ने थलो । त्यसकारण पनि जुनसुकै अफिस होस् कुनै हेलचेक्राइ तथा मनपरी गर्नु हुन्न जसले तपाइको जीवनमै नकरात्मक छाप पर्न सक्छ । अफिसमा जागिर जोगाउन तिकडम गर्ने कर्मचारीदेखि आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्ने कर्मचारीसम्म हुन्छन । साथै हुकार गर्ने हाकिमदेखि पारिवारिक मनोभाव जगाउने हाकिमसम्म पनि हुन्छन । अफिस कसरी चलाउने भन्ने भन्ने कुरा अफिसका ब्यबस्थापकमा निर्भर हुन्छ जव ब्यबस्थापन चुक्छ तब अफिस लथालिङ्ग र मनपरी बढ्न जान्छ । यसको प्रत्यक्ष असर नतिजामा पर्छ । हामीले यहाँ अन्जानमा अथवा जानीजानी बिभिन्न स्वार्थ राखेर कर्मचारीहरुले गर्ने बिभिन्न ९ गल्ती/ कमजोरी प्रस्तुत गरेका छौ । जुन जो कसैले पनि कार्यालयमा कहिल्यै गर्न हुदैन । यसले तपाईको व्यक्तिगत जीवनमै नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
२७ पुष २०७२, सोमबार १०:२०	0 1,555
‘नो पाइन्ट डे’ भन्दै केटीहरुले धमाधाम पाइन्ट फुकालेपछि…
२६ पुष २०७२, आईतवार १४:२६	0 6,041
कि रेखाको चल्छ कि देखाको चल्छ भनेर नांगिनको लागि तयार भएको अभिव्यक्ति धेरै नयाँ तथा स्थापित मोडल र नायिकाले सार्वजनिक मञ्चमा भन्दै आएका छन्। जे होस् नेपालमा नांगिन छुट छ, मोडलिङ र कलाकारिताको नाममा। नग्न सभ्यताले यतिखेर बालखैकालमा पोर्न खेल्छु भन्दै नांगो फोटो फेसबुकमा अपलोड गर्ने अर्चना पनेरुलाई समेत सेलीब्रेटी बनाएको छ नेपालमा। नेपालका दुर्इ ठूला दैनिक त शुक्रबारे पत्रिका नै निकालेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। शुक्रबार बजारमा निस्कने पत्रिकामा पढ्ने सामग्री भन्दा पनि नांगा फोटा प्रकाशन गरेर कलिलै उमेरका केटाकेटीलाई मानसिक रुपमा यौन र यौनिक अपराधका लागि उत्साहित गर्ने सामग्री मात्र पस्किइएको हुन्छ। विकसित देशका केही मानिसहरु अभियानको रुपमा नग्नतालाई सामाजिक अभ्यासको लागि लिएर अगाडी बढिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै अभियानको रुपमा विश्वका धेरै देशमा 'नो पाइन्ट डे' अनि 'नो स्कर्ट डे'का रुपमा मनाउन थालिएको छ। हरेक वर्ष जनवरीमा मनाइने यो दिन शहरका विभिन्न रेल स्टेशनमा युवा युवतीहरु पाइन्ट तथा स्कर्ट नलगाइ कट्टुमा मात्र अफिस वा काममा गइरहेका हुन्छन् हेर्नुस भिडियोमा